ABOn akka hin baqnee fi akka hin bannetti Handhuurame gaafa hundeeffame. – Kichuu
HomeNewsAfricaABOn akka hin baqnee fi akka hin bannetti Handhuurame gaafa hundeeffame.
HDn ABO Jaal Daawud Hoggantoota ABO haarawaa waliin marii godhan.
Haala yeroo ammaa tahaa jiru irratti Hoggantootni ABO olaanoon HD ABO jaal Daawud Ibsaa waliin wal arguun marii gaggeessuun haal duree hojii gara fuulduraa akeekkatuu gabaasaan arganne ni ifoomsa. Hoggantootni guyyaa har’aa Fulbaana 15/2020 HD ABO waliin qal argan Dubbij Himaa ABO jaal Mahaammad Raggaasaa, Sub-quunnamtii Hawaasaa ABO kan tahan jaal Battee Urgeessaa fi Qondaala Siyaasaa ABO kan tahan jaal Gadaa Gabbisaadha. Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba ummataan hogganamu malee namoota dhuunfaan butamu ykn laamsha’u miti.
Kaayyoon ABO dhaloota Qubee harka jira.
Hoggansi ABO Fulbaana 15/2018 waggaa lamaan har’aa gaafa Finfinnee dachee Oromiyaatti gale ammaan booda dhaabni kun kan dhaloota Qubeeti kan keessani jechuun Dirree Masqalaa irratti HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa ifatti dubbatanii turan.
Gaggeessummaa ykn hoggansummaa jaal Daawud Ibsaan ABOn Shira mootummaan xaxuu fi gantootaan marroo sadii oliif irratti dalagus cichoomina qabsaa’ota haqaa fi HD ABO jaal Daawud Ibsaan akka diinni yaadetti osoo hin taane akka jaallan kaayyoo dhaamanij wareegamanitti kaayyoo isaanii tiksanii asiin gahaniiru. Warri dhaaba ABO keessatti ganan hundi har’a Mootummaa sirna nafxanyaa waliin ummata Oromoo hiisisaa, Ajjeesisaa ,qabeenyaa saamsisaa akkasumas Shamarranii fi Hawwan Oromoo akka gudeedaman gochisiisaa jira.
Dirqama Tikni Mootummaa akka isaan dhaaba Oromoo ABO dadhabsiisanii gi dhabamsiisaniif itti kenne cichoomina qabsaa’ota haqaa gi jaallan kaayyoo ABO dura wareegamanii kaayyicha tiksaniin as gaheera ammas ni jiraata.
ABOtti warreen Mootummaa waliin dugda galanii gootota qaalii jaallan cichoominaan qabsicha utuban hidhaatti guursisaa jiranii fi hiisisanii jiran galmee seenaaf dhiisnee warraaqsa Fuuldura keenyatti nu eeggatuuf ummatni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jiru adda durummaan immoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo hojii guddaan akka isin eeggatuu fi dhaabni kun akka isin harka jiru hubattanii akka qabsoo jaallan itti wareegamanii fi wareegamaa jiran tiksitan akkuma HD ABO Fulbaana 15/2018 guyyaa simannaa dhaame har’a dhaaba ummata Oromoo tiksuu fi utubuun dirqama dhaloota Qubeeti.
Abbaan Seeraa Betiruu Dibaabaa humna tikaan qabamee hidhame.
Oggeessotni seeraa ummataa fi biyyaaf quuqama qaban mootummaa sirna nafxanyaa leellisuun qabamanii hidhamaa jiru. Akkaataa qotee bulaan Oromoo Finfinnee fi naannawa ishee maqaa misoomaa fi Investimentiin lafaa fi eenyummaa isaa itti mulqame irratti qorannoo guddaa taasiseen gadi fageenyaan rakkina Qotee bultootaa naannawa Finfinnee mudataa turee fi jiru kan ifatti baase Abbaan Seeraa Betiru Dibaabaa har’a fulbaana 15/2020 humna tikaan qabamee mana hidhaatti darbameera. Betiruu Dibaabaa gorsaa Taakkalaa Uumaa ta’ee yeroo xiqqoofis tajaajila kennaa turee booda shakkii irraa dhabuun achii jijjiiruu isaanii odeessi arganne ifa godha.
“Miseensota Shanee Gumii ugguruuf Gumiin Sabaa aangoo qaba”
[SQ Fulbaana 15/2020]
Yeroodhaaf gaafatamaa sab-qunnamtii ABO ta’uun tajaajilaa kan jiran Jaal Battee Urgeessaa gaaffiifi deebii OBS waliin taasisaniin haala ABOn keessa jiru ibsaniiru. Ibsa guyyaa kaleessaa ‘Hayyu Duree ABO uggurreerra’ jedhu ilaalchisees “waan kana gochuudhaan akka heera ABOtti aangoo kan qabu Gumii Sabaa ABO’ti” jedhaniiru.
Gumiin Sabaa ABO ammoo namoota amma ‘Hayyu Duree uggurre’ jedhan hojiirraa dhaabsisuu isaanii himaniiru. “Haala seera dhaabaa hin eegneen sirnaa ala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti daba waan dalaganiif hojiirraa ittifamaniiru” jedhan. Sochii naamusa dhaabaa cabsu kana miseensi ABO fi uummanni Oromoos taa’ee akka hin ilaalle himan.
Ittuma dabaluun “Addi Bilisummaa Oromoo hoggansa dhaaba kanaa dhaloota haaraatti dabarsuuf qophiirra ture ammas itti jira” jedhan. “Egereen ABO maal ta’a?” jedhamee gaaffii OBS irraa dhiyaateef yommuu deebisan Jaal Batteen “egereen ABO homaa hin ta’u; ABO harka uummata Oromoo fi onnee saba kanaa keessa waan jiruuf yaaddoo homaatuu hin qabnu” jechuun deebisan, “Qaamni amma dhaaba keessatti rakkoo uumaa jirus yoo rakkootu jira ta’e kora sabaa irratti yaada isaanii ibsachuu danda’u malee mootummaatti hirkatanii dhaaba keenya jeequu hin danda’an” jedhan.
“ABOn keessa isaa qulqulleessii deemsa itti fufa malee kaayyoon hin sharafamu” jedhaniiru.